Nagu saabsan - Yantai Jiajia Instrument Co., Ltd.
Yantai Jiajia Instrument Co., Ltd cilmi baaris isdaba-joog ah iyo horumarinta tikniyoolajiyad cusub oo ku saabsan miisaanka warshadaha. Iyada oo ku saleysan tiknoolajiyad cusub, oo ka sii wanaagsan oo sax ah, Jiajia waxay isku dayeysaa inay abuurto koox ugu fiican oo xirfad leh, si loo soo saaro alaabooyin miisaaman oo aamin ah, cagaaran, xirfad iyo xirfad badan. Ujeeddadeedu tahay inay noqoto bartilmaameedka alaab-qeybiyaha ee miisaanka alaabada.
Iyada oo ay la socdaan dhaqamada shirkadda “Faahfaahinta ayaa isbeddel samaynaysa. Aragtida ayaa wax walba go'aamisa. , Jiajia waxay daba joogtay daba galka cillad eber ee tayada wax soo saarka, masaafada eber ee adeega, eber eber cabashooyinka macaamiisha ujeeddo ahaan.
Si adag u xakamee habka wax soo saarka iyo alaabada kaamil ah, Jiajia waxay bixin doontaa adeeg hufan & daacad ah, isgaarsiin daacad ah oo isku day inaad saaxiib la noqoto dhammaan macaamiisha. Iyada oo leh dabeecad dhab ah oo qumman, Jiajia waxay noqon doontaa tusaalaha miisaanka miisaanka.
Jiajia waxay ku takhasustay R&D, wax soo saarka iyo suuqgeynta waxsoosaarka miisaanka oo ay ku jiraan miisaanka gawaarida, miisaanka tijaabada, nidaamka xakamaynta culeyska.
Dhammaan miisaanka wershadaha ee dhammaan cabbirka iyo qaababkaba, softiweerka lagu xakameeyo laguna kormeero habka wax soo saarka ayaa laga heli karaa halkan. Waxay ka caawineysaa hagaajinta wax soo saarka iyo tayada nooc kasta oo xal ah sida sameynta, tirinta iyo codsiyada kale.
Wax soo saarkayaga waxaa laga heli karaa nooc kasta oo warshad ah sida xirxirida, saadka, macdanta, dekedaha, wax soo saarka, shaybaarka, supermarket iwm
Ku dhowaad 20 sano oo khibrad wax soo saar iyo injineero farsamo yaqaan ah, JIAJIA waxay la kulmi kartaa baahiyaha kala duwan ee macaamiisha loogu talagalay alaabada caadiga ah iyo alaabada la habeeyay.
Ku dhowaad 20 sano oo khibrad ganacsi shisheeye ah, oo aqoon u leh soo dejinta iyo dhoofinta habraacyada iyo shuruudaha, ayaa ku siin kara talo xirfadeed iyo ra'yi.
Kooxaha iibka xirfadeed ee 8 luqadood oo kala duwan ayaa kula xiriiri kara macaamiisha iyadoon caqabado jirin. Faham badan, dhakhso badan oo sax ah oo ku saabsan baahida macaamiisha.
Mass Calibration, Miisaannada Miisaanka ee Miisaanka Dijital ah, Miisaanka Miisaanka Miisaanka, Shear Beam Load Cell, Miisaan Miisaanka Miisaaniyadda, Miisaanno La Xaqiijiyay,